इरफान खान घर फर्किँदा पत्नी भावुक बनेपछि…, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
इरफान खान घर फर्किँदा पत्नी भावुक बनेपछि…
एजेन्सी । अभिनेता इरफान खान घर फर्किएका छन् । एकदम दुर्लभ र निकै जटिल प्रकृतिको क्यान्सरबाट पीडित रहेका इरफान उपचारपछि लन्डनबाट घर फर्किएका हुन् । उनकी पत्नी सुतापा सिकदरले पनि इरफानलाई सक्दो ढाडस दिइरहेकी छिन् ।
उपचारबाट फर्किएका इरफान खानले आफ्नो फिल्मको छायांकन सुरु गरेका छन् । उनी फिल्म ‘हिन्दी मिडियम’को सिक्वेल ‘अंग्रेजी मिडियम’मा काम गर्दैछन् । हालै यस फिल्मको सेटमा इरफान खानको तस्वीर भाइरल भएको छ ।
अहिलेसम्म यस कुराको खुलासा भएको छैन कि फिल्ममा इरफान खानको अपोजिटमा कुन अभिनेत्री छिन् । खबर अनुसार उनीसँगै यस फिल्ममा करिना कपूर खान देखिनेछन् ।